भर्नाको लफडो आएको छ | मझेरी डट कम
छोरीको दाँत उम्रनु कता हो कता घरमा देउसी भैलो खेल्नेहरुको जस्तै लावालस्कर लाग्न थाल्यो छोरी माग्नेहरुको । उहिलेको बेलामा भए ता बिहेकै लागि केटी माग्नेहरु आएका भन्न सकिन्थ्यो होला तर अहिले यसरी मेरी छोरी माग्न आउनेहरु आफ्नो बालक वा जवान छोराका लागि बुहारी माग्न आएका भने थिएनन् । अलिक जमाना फेरिएको छ । तर पनि भान हुन्थ्यो यी सबै कन्यार्थी वरहरुका आफन्त नै हुन् । एउटा टोली घरबाट निस्कन पाएको छैन, अर्काे टोली थपक्क घरमा आइपुग्छ, अर्काे निस्कन पाएको छैन, अर्काे लगत्तै आइपुग्छ । कस्तो कचेडा हो यो, अनि कस्तो घनचक्करको लफडा हो यो ! म आजित हुन लागिसकें । आमाको दूध छुटाएकै छैन उसलाई भर्ना गर्नुको तानातान देखेर विरक्तिन थालिसकी छोरीकी आमा पनि । उसलाई किन्नर गार्डेनमा भर्ना गरिहाल्नु अरे । मेरी छोरीलाई किन्नर गार्डेनमा भर्ना गरिमाग्न आएका मगन्तेहरु पो रहेछन् यिनीहरु ता ।
टोलीका टोली आएको छ आएको छ । बालकलाई आमाको दूध खान पनि दिएनन् यिनले । यिनीहरुका आँखाबाट यो नानीलाई लुकाउनै पर्ने भयो मैले । बजियाहरुको के रिन खाएको रहेछु कोनि आफ्नो घरभित्रै आफ्नै छोरी लुकाउनु पर्यो । केही सिप नलागेर लुकाएँ पनि । मानौं म छोरीलाई दाँतै नउम्रिई गुफा बसाउँदै छु । खुला सास फेर्न दिने भएनन् पापीहरुले, मलाई आफ्नो खुसीले केही गर्न दिने भएनन् असतीहरुले । यिनका अघि नानीहरुलाई पार्नु भनेको शिकारीहरुले शिकार पाउनु जस्तो हुन्छ भनेर नै यिनका आँखाबाट छोरी र उसकी आमालाई अलग्गै राखें तर के गर्नु र छोराछोरी घरमा थुन्नु पनि ता भएन । अलिक खुकुलो ता गर्नु पनि प¥यो । प्रजातन्त्र पछिको गाणतन्त्र समेत आइसकेका बेलामा आफ्नो घरमा आफ्नै सन्ततिलाई के कैदी र बन्दी जस्तो बनाउनु ? छ्या है ।
हेरौं के हुन्छ अब.....
शब्दहरूसँगको खेलसँग डर लाग्छ